နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: အကောင်းမြင်၊ အဆိုးမြင် နှင့် လက်တွေ့ကျသောအမြင်
Labels: Tag Post, အောင်မြင်ရေးစာစု
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကောင်းမြင်သူလို့ ထင်မိတာပါပဲ။ လက်တွေ့ကျကျတွေးလေ့ရှိပြီး ရာဇဝတ်သား တစ်ယောက်မှာတောင် သူ့အကြောင်းပြချက်တော့ ရှိမှာပဲလို့ တွေးပေးလေ့ရှိတယ်။ ပြဿနာ တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း ဘယ်လိုခွင့်လွှတ်ရမလဲဘဲ တွေးဖြစ်တယ်။ ခက်တာက ခွင့်လွှတ်တတ် အလျော့ပေးတတ်တော့လည်း လူက တန်ဖိုးမဲ့ သလို နောက်ဆုံးမှပဲ ကိုယ့်ကို ထည့်တွက်ခံရတယ်။
အဆိုးမြင်သမား က ခွက်ထဲမှာ အရည် တစ်ဝက် လျော့
အကောင်းမြင်သမား က ခွက်ထဲမှာ အရည် တစ်ဝက် ပြည့်နေပါလားလို့မြင်တယ်......အဲ ..
ဘီယာ ကြိုက်တဲ့ ငနဲကတော့ ငါ့ဘီယာကို ဘယ်ကောင်
တစ်ဝက်သောက်သွားတာတုန်းကွ ဆိုပြီး ဒေါသထွက်နေ
အပြုသဘောပါတဲ့ စာစုတစ်ခုပါပဲ.....း )
တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ မြင်တတ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါဗျာနော့်........။
(သူကတော့ သင်္ကြန်မှာ အိမ်ပြန်နှပ်တော့မယ်ပေါ့ဗျား.......း))
သင်္ကြန်မှာ ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေသိင်္ဂါရေ
နှစ်သစ်မှာ အသစ်အသစ်တွေနဲ့ ပျော်ပါစေ..း)း)
နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်မှာ ပျော်ရွှင်စရာ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
“အမြဲအကောင်းမြင်ပြီး ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ် ကျေနပ်နေရာကနေ တိုးတက်ဖို့ မကြိုးစားဘူးဆိုရင်လည်းအဲဒါကောင်းတဲ့ ရလာဒ် မဟုတ်ပါဘူး” ဆိုတဲ့ စာလေးကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျ မြင်တတ်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ လိုတာပေါ့နော်။
မြင်တာချင်းအတူတူ .. အဆိုးကို မြင်တော့ ကိုယ်ကလည်း ဘယ်စိတ်ချမ်းသာ ရမလဲ. . . အကောင်းကို မြင်သော နှစ်ဦး နှစ်ဖက် စိတ်အေးချမ်းတာပေါ့. . .
ရေးပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ . . .
လို့ လှပသစ်လွင်နေတာပါလားဟရို့ 
"ပထမဆုံး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ချို့ယွင်းချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် အဆိုးကို အဆိုးအတိုင်း မြင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။"
အကောင်းနဲ့အဆိုး ဆိုတာ ဒွန်တွဲနေတဲ့အရာမို့...
အဲ...အဆိုးကို အကောင်းဘက်ရောက်အောင်တော့ တတ်နိုင်သလောက် ပို့ဆောင်လမ်းညွှန်ပေးရမှာပေါ့..။
ညီမကကျတော့ အရင်တုန်းက သူများတွေဆိုရင် အကောင်းသိပ်မြင်တတ်တယ် ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ တတ်နိုင်သလောက် အမှန်အတိုင်းမြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။ ခုတော့ သူများတွေကိုလည်း အမှန်အတိုင်း မြင်တတ်နေခဲ့ပြီ ။ အတွေ့အကြုံကြောင့် ထင်ပါရဲ့.....။ ရေးတတ်သလိုလေးရေးထားတာကို သေသေချာချာ ဖတ်တတ်သလိုလေး ဖတ်သွားပါတယ် အစ်မရေ...း)